पर्सि मंगलवार ‘लाष्ट एपिसोट’ | परिसंवाद
गफाष्टक आइतबार, साउन ११, २०७७ मा प्रकाशित
ए झुम्री तेरो भाइ लाक्पालाई बोला त !
किन बोलाउनु प¥यो त्यसलाई ? त्यही नेकपाको कुरा गर्न त होला नी ! लाक्पा त माधव नेपाल गुटको मान्छे हो । बरु तिम्रै साथी माओवादीको तोक्मेले नै प्रचण्डको पक्षमा धारा प्रवाह लेक्चर दिन सक्छ । उसैलाई बोलाउँदा भै गो नि !
हौ काका नमस्कार है । काकीलाई पनि नमस्कार गरें । अब त काकाहर्को राजनीति सकियो । पार्टी नफुट्ने भयो चोइटिने मात्र भयो । मलाई त गज्जब राम्रो हुने भो।
के भन्छ यो भिरघरे ! काँग्रेसहर्को त कुरै नबुझ्ने भैयो ।
किन बुझ्थेउ त बुढा तिमीले ! अस्तिकै दिन प्रचण्ड र माधव नेपालले भाषन ठोकेको तिमीलाई थाहै छैन । ¬
हो त काकी ! काका त कुरै बुझ्दैनन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल कन्दनी कसेर ओलीको विरुद्धमा लागेको थाहै छैन । अब ‘सिनारियो क्लियोर’ भयो । हाम्रो काँग्रेसको भाग्य ।
लौ यो हावाको गफ नगर भिरघरे । जीवन्त पार्टीमा वादविवाद हुन्छ, मनमुटाव र पेट माझामाझ पनि हुन्छ । यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो । गर्तमा जाकिएको मरनच्याँसे पार्टी होइन विशाल र विस्तारित पार्टीमा विभिन्न खाले अभ्यासहरु हुन्छन् ।
लु तिम्रो सालो लाक्पा पनि आई पुग्यो । त्यो मुढा तानेर बस । तेरो भेनाले खोजी गरीराको बेला टुप्लुक्क आईपुगे छ ।
किन खोजेको भेना ?
किन खोज्नु ! माधव नेपालहर्को खबर के छ ? के गर्दैछन् ? पार्टी फुटाउँछन् कि फुटाउँदैनन् ? तलाई कस्तो खबर आको छ भनेर सोध्न बोलाको नि !
अब वारपार हुन्छ भेना ! माधव कामरेडसंग बहुमत पार्टी सदस्य छन् । प्रचण्डसंग मिलेर ओलीलाई डाँडो नकटाए नहुने भको छ । अति नै भो भेना ? अति नै । मलाई त ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको देखेर भाउन्न हुन्छ भने प्रचण्ड जस्तो जण्ड र बगुवा (खहरे जस्तो) नेतालाई के भाको होला ! कसरी खपे हुनन् ।
माधव कामरेडको चै कुरो गर्न ! निज के भन्छन् ! हाम्रो प्रचण्डलाई दिन्छन् कि नाई !
म भन्छु हौ काका ! लाक्पाले अध्यक्ष र प्रभानमन्त्री पनि माधव नेपाल हुनुपर्छ भन्छ नि !
भको कुरो भन्छु नि ! अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुने नै हाम्रो माधव कामरेड हो ।
हैन, फुट्दैन कि क्या हो !
लु… भिरघरे नै भन्न त अब राजनीति कुन रुपमा अगाडि बढ्ला!
अब पाङ्दुरे कुरुपमा अगाडि बढ्छ– जनताको विश्वासको मत माथि विश्वासघात गरे पछि । नेकपा रुपको नरहने भयो ।
केपी ओलीले मागेको भोटले नेकपा फस्टाएको थियो । तर, के जातिलाई के जाति पचेन भने जस्तै हुने भयो । कि कसो लाक्पा!
त्यस्तो होइन भिरघरे दाइ ! एकलौटी शासन गर्न थालेपछि कल्ले सहन्छ ।
फेरि भएन पैले पैले नौ नौ महिना सरकार चेनफेन हुन्थ्यो । अहिले तीन वर्ष हुन लाग्यो एउटै ब्यक्ति बसेको छ छ ! हाम्रा प्रचण्ड र माधव कामरेडलाई खपी नसक्नु हुनु स्वभाविकै हो । अब प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर ओलीलाई कुर्सीबाट तानेर…!
लु लक्पा केटाकेटी कुरो नगर । ओलीलाई हुत्याउँदा कुर्सी पनि हुत्तिन्छ भन्ने नविर्सी । ओली त्यहाँ झिंगा मारेर बसेका छैनन् । ओलीलाई हुत्याउँदा नेकपाको भागमा परेको र भविष्यमा भागमा पर्ने सबै कुरो हुत्तिन्छ । नेकपा भन्ने पार्टी पनि हुत्तिन्छ । अनि त ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ को अवस्था नेकपाका नेताहर्ले भोग्छन् । कि कसो काकी !
हो नि भिरघरेले ठिक भन्यो । नेपाली जनताले पार्टी भन्दा पनि कामको आधारमा व्यक्तिको मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । अब अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न लालायित व्यक्ति पनि परीक्षण भै सकेका ब्यक्ति हुन । ओलीले त यही बीचमा पनि चुच्चे नक्शा र नागरिकता सम्बन्धी कानून ल्याएर इतिहासमा नाम त लेखी सके! माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भाकै हुन । त्यस बेला यिनार्को काम नदेखेको हो र!
यस्ता कुरा नगर झुम्री ! पार्टीले निर्णय गरेर भ’को कामलाई ओलीले मात्र गरेको भनेर ब्यक्तिको देवत्वकरण गर्न खोजिदै छ । माधव र प्रचण्डको चित्त पनि यही कुराले गर्दा सारै दुखेको छ । आत्मा पनि नराम्रोसंग तड्पी रहेको छ ।
ए काका ! काकीलाई के हप्काउँ छौ । तिमी रिसाएर केही हुने वाला छैन । अब दुई वर्ष माधव र प्रचण्ड पर्खिन सकेनन् भने ‘समाप्त भैस् मंगले, ओलीको रिसले’ हुन्छ । मेरो कुरो कस्तो लाग्यो लाक्पा ।
कस्तो पनि लागेन । हेपिएर बस्नु भन्दा झोली तुम्बा बोकेर उछिट्टिनु नै निको !
यो लाक्पा पनि के भन्छ ! अनि राजनीतिबाट सन्यास लिनु ! यस्तो कुरो नगर । अति भो भने खती हुन्छ ।
हौ काका जे हुने हुन्छ । ओलीको बिरोध पनि अति नै भयो । अब चुनापसम्म त झगडा गर्छन् । त्यसपछि स्वाहा भा’को तमासा हेर्छन्, रुन्छन्, बस्छन् । पश्चाताप गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । लौ है काका-काकी !